Profaịlụ - Ningbo Jiali Plastics Co., Ltd.
MFE AFỌDE MFE, MFE MB SIM
Prọfesọ Razor Kemgbe 1995,Ruo ihe karịrị afọ 25, JIALI gbara mbọ inye gị ahụmịhe mara mma ma dị mma karị. Ihe nketa nke okwukwe “ọ bụrụhaala na obi dị, ọ dịghị iwu na a ga-emerụ ya”, dabere n'okpukpe nke teknụzụ.
Anyị na-enye agụba site na otu agụba ruo mma isii ma maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị. Pụtara ìhè imewe bụghị naanị na-enwu gbaa ọhụụ, kamakwa fashionable nlereanya na magburu onwe ọrụ na-nlezianya ngwakọta n'ime ihe nile zuru ezu ike ebighị ebi na magburu onwe shaving ahụmahụ n'ihi na ị.
Nhọrọ Ndị Nwanyị Mara Mma
Nhọrọ Ndị Dị jụụ
The Uru Of Function
Agụba, imewe, ihe onwunwe, mmanu warara na ịchọta aka na-ewetara gị ntụsara ahụ na mmetụta n'oge ịkpụ afụ ọnụ.
Ningbo Jiali plastic limited company bụ ụlọ ọrụ na ahia ụlọ ọrụ, emi odude ke Ningbo sayensị na Technology Industrial Park. Ọ na-ekpuchi mpaghara nke 30 mu, mpaghara ụlọ nke 25000 square mita. Anyị nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 20 nke ịmepụta agụba. Isi aguba anyị nwere agụba Anọ, mma mmaji atọ, .twin agụba na otu agụba. Anyị nwekwara eji agụba pụrụ iche na Mkpọrọ, ọgwụ na ihe ndị ọzọ. Anyị nwere ike ịmepụta 200 nde PC agụba kwa afọ. Ngwaahịa na-exported na Europe, na United States, Australia, na Middle East na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia na ndị ọzọ na mpaghara, Ma na anyị nwere imekọ ihe ọnụ na "AUCHAN" SUPER MAX, Dollar osisi, na ndị ọzọ ma ama ụlọ ọrụ.
Companylọ ọrụ ahụ nwere ihe dịka ndị ọrụ 320, ndị isi njikwa ndị ọrụ nke mmadụ iri anọ na ise, ndị ọrụ injinia etiti 8, ndị ọrụ teknụzụ mmadụ iri anọ, onye ndụmọdụ ọkachamara na mpụga 2, akara kọleji ma ọ bụ karịa 50.The ụlọ ọrụ ahụ nwere otu egwuregwu siri ike maka teknụzụ ahụ. imewe, n'ichepụta. Sale na ọrụ. anyị nwere ikike patent nke agụba karịa 20 ụdị si 2008-2011. anyị emechala usoro mgbakọ nke mbụ maka agụba n’afọ 2009. Ugbu a, anyị karịrị ihe iri n’ime igwe akụrụngwa a maka imepụta agụba. Ogo dị mma karịa agụba nke nzukọ na aka. Ugbu a, anyị bụ naanị otu ụlọ ọrụ nwere ike mgbakọ agụba site na nke a igwe na china. E nyere ụlọ ọrụ ahụ ebe etiti teknụzụ na agụba. Ma nyekwa ya ụlọ ọrụ eziokwu.
Ugbu a, anyị nwere ihe karịrị 40 setịpụrụ igwe akụrụngwa akpaka. 4 setịkọ igwe igwe. 15 setịpụrụ nke usoro mgbakọ. 10 set nke akpaka mmepụta. Anyị nwere ụlọ nyocha maka agụba. Ma ọ nwere ike nwalee ekweghị ekwe .sharpness na n'akuku agụba. Nka na ụzụ ahụ nwere ike ime ka mma agụba dị mma ma ka mma.
Factorylọ ọrụ anyị agafeela akwụkwọ nke ISO9001 ： 2008 iji bulie ogo nke njikwa njikwa nke ụlọ ọrụ ahụ, (Na-adabere na uru ọ bụla.) "Ọdịmma dị elu, ọnụ ahịa ezi uche, na ọrụ kacha mma" bụ ụkpụrụ nke ụlọ ọrụ anyị. Mmadụ Bịa na ileta anyị factory na negotiated azụmahịa na anyị. ozi. Ihe olile anya anyi bu imeputa mmekorita ahia nke di ogologo.